Azonao atao ve ny manampy ahy amin'ny fitaovana maotina amin'ny teny malaza ho an'ny lisitra Amazon lisitra?
Ny fananana pejy tsara vokarina tsara ho an'ny e-varotra SEO ary voatsangana miaraka amin'ny fitaovana maoderina amin'ny teny malaza ho an'ny Amazon dia midika fa afaka manintona kokoa ny sain'ireo mpividy mitady ny zavatra amidy any. Ampiasaina tsara, hanova ny anjaran'ny liona amin'ireo mpanjifa mbola tsy voatsimbina ao amin'ny tena mpividy ny fividianana anao. Ary ny fametrahana seha-pifanarahan-kafatra mifanentana amin'ny adiresy lehibe indrindra amin'ny toerana mety dia hanampy anao amin'izany. Mazava ho azy, tsy misy fikarohana fikarohana izay mety hitondra ny fivarotan-tseraseranao mankany amin'ny fahombiazana faratampony, farafaharatsiny irery. Ary na manao ahoana na manao ahoana ny kinendry tokony ho izy. Midika ve izany fa lasa mpivarotra tena eo amin'ny Amazôna aho, betsaka ireo zavatra manan-danja hafa tokony hijerena tsy tapaka, hikirakotra, ary heverina hatrany hatrany.
Tsy lazaina fa toy ny fivarotana biriky mahazatra hafa rehetra, ity sehatra ecommerce amin'ny aterineto ity dia nanjaka indrindra amin'ny vidin'ny fifaninanana, ary koa ny tompon'ny varotra tsirairay sy mendri-pitokisana. Na dia izany aza, miaraka amin'ny fikarohan-dàlana amin'ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny fampiasana fitaovana maotina tsara ho an'ny Amazon, dia azonao atao ny manao ny zavatra mora kokoa. Raha ny tena izy, dia io no hany fomba azo itokisana amin'ny fametrahana ny fitohizan'ny mpitsidika tsy tapaka mitsidika anao rehefa mila ny sasany amin'ireo zavatra novidinao. Noho izany, etsy ambany dia safidy tsara vidy tsara ho anao ny misafidy ny sariohatra ho an'ny tenanao manokana ho an'ny Amazon ary manapika ny tsena feno olona miaraka amin'ny lisitry ny vokatrao aseho eo an-tampon'ilay fikarohana.
Ny mpanampy amin'ny aterineto voalohany tokony hotsarainao ho an'ny androany dia ny mpanamboatra Keyword Tool Dominator. Ao anatin'ireo andaniny matanjaka indrindra dia misy soso-kevitra maimaimpoana manan-danja izay afaka manome anao sary lehibe momba ireo teny manan-danja manan-danja sy ireo teny lava fohy ampiasain'ireo mpividy mivantana amin'ny Amazon. Amin'izany fomba izany, dia ho afaka hiasa hatrany ianao, ary mijanona ho vonona hatrany hampihatra ny fikarohana voalazan'ny tadiavina izay nalaza hatramin'izao ary azo inoana fa hanjary hivoatra bebe kokoa amin'ny fotoana. Amin'ny dikan-dikan-dikan-teny manan-danja amin'ny fidirana malalaka dia afaka manomboka hatramin'ny telo isan'andro isan'andro ny fanontanian'ny teny filamatra. Ary mety handoa vola 16 dolara avy hatrany ianao mba hankafizinao amin'ny endriny manontolo amin'ny dikan'ity rindrambaiko ity.
Mpanjifa mpahay siansa
Zava-baiboly maoderina tsara ho an'ny Amazon, izay tena mahasoa rehefa manafoana ny teny fanalahidy rehetra na fikajiana maharitra Fitenenana - saika tsy misy fotoana. Ny mpividy siantifika dia fitaovana maimaim-poana amin'ny aterineto hanohanana ny lisitry ny vokatrao amin'ny Amazon amin'ny fanadihadiana manan-danja sy ny soso-kevitra sasantsasany azo ampiharina ho an'ny sokajy na ny sokajy ho an'ny vokatrao. Mariho anefa, mba hahatonga ny ankamaroan'ny mpahay siansa amin'ny sehatry ny siansa, manoro hevitra mafy aho fa mihazakazaka miaraka amin'ny Google's Keyword Planer. Amin'izany fomba izany, ianao dia hisoroka ny tsy fitovian-kevitra, toy ny tsy misy tarehimarika marika mifandraika amin'ny teny fanalahidy na ny andian-teny lava fohy izay toa miseho diso Source .